Top News:- Madaxwayne Farmaajo Oo Ra’iisul Wasaaraha Cusub Baarlamaanka hor geynaya.
February 28, 2017 - Written by berka83 - Edited byberka83 Madaxwaynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalinta berri ah ee Arbacada 29 Febraayo 2017 Labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya hor geeyo Ra’iisul wasaaraha cusub Xassan Cali Khayre oo uu dhawaan u magacaabay xilkaan.
Warar la xiriira Xasaanad siinta ra’iisul wasaaraha Cusub ayaa sheegaya in furitaanka Kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya cod loogu qaadi doono Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre, iyadoo hadduu codka ku filan uu helo uu noqon doono Ra’iisul wasaaraha dalka haddii kalena ay tahay in Madaxwaynuhu uu ra’iisul wasaare kale soo magacaabo.
Madaxwayne Farjaamo ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furo fadhiga baarlamaanka ee biri, isagoo ka codsan doona inay codkooda kalsoonida siiyaan Mr Khayre.
Wararka ku dhow dhow Villa Soomaaliya waxay sheegayaan in Ra’iisul wasaaruhu uu heli karo codka baarlamaanka, isagoo maalmihii lasoo dhaafay inuu xildhibaanada labada aqal ula kulmo beel beel, waydiisanayeyna inay codkooda kalsoonida siiyaan.
Madaxwayne Farmaajo ayaa markii uu si lama filaan ah u magacaabay Xassan Khayre wuxuu sheegay inuu yahay nin ay wada shaqayn karaan, uuna rajaynayo inay wada dhammaysan karaan 4-ta sano ee uu xilka hayo, uuna yahay masiil xilkas ah oo ku shaqayn doono Aragtidiisa iyo qorsheyaashiisa.